Uma baahnid Shahaado Ganacsi si aad tan u Fahanto | Martech Zone
Arbacada, Oktoobar 23, 2013 Arbacada, Oktoobar 23, 2013 Douglas Karr
Hagaag, waa waqtigii qaylada. Toddobaadkan waxaa laygu garaacay dhowr jeer runtiina waxaan luminayaa in qaar ka mid ah dadkani ay sameeyeen illaa iyo inta ay ganacsi ku leeyihiin. Waxaan rabaa inaan si toos ah u helo waxyaabo yar markii aad u socoto gorgortanka iyo ka iibsashada adeegyada Wakaaladdaada ku xigta.
Qiimuhu waa Waxaad Bixiso, Maaha Waxa Aad Hesho
Tani waa qiimaha badeecada ama adeegga aad raadineyso inaad iibsato. In kasta oo qiimaha laba shey ama laba adeeg ay sax ahaan isku mid noqon karaan, badeecada ama adeegga dhabta ah ee aad helaysaa isku mid noqon maayo. Natiijo ahaan, fadlan ha weydiin liistada wax iibsiga ee liita oo codso xigashooyin xaddidan… waan ognahay waxaad sameyneyso. Waxaad qaadan doontaa liiska dukaamaysiga oo aad codsatay xigashooyin xaddidan oo aad u dukaamaysato dadka kale oo dhan. Dad kale ma nihin. Iyadoo aan loo eegin sida ay u faahfaahsan tahay liiska wax iibsiga, waan ku celinayaa, ma nihin qof kasta oo kale. Waxa aan ku siineyno ayaa ka duwanaan doona. Astaamo kala duwan, adeegyo kala duwan, jadwal kala duwan, dabeecado kala duwan iyo ugu dambeyn natiijooyin ganacsi oo kala duwan.
Haddii aad u adeegato hay'ad qiimaheeda, waxaad tahay qof khasaaray oo aan fahmin ganacsiga. Halkaas, ayaan ku idhi. Suuqgeynta internetka ma ahan Wal-mart. Jooji.
Bixinta wax kayar micnaheedu maahan inaad lacag keydisay
Waxa aad go'aansatay ee aad ku heshiisay bixinta ayaa ah, waxaan rajeynayaa, inay ku xiran yihiin qiimaha aad saadaalinayso inaad ku helayso alaabta ama adeegga. Haddii aad heshay ruqsad sanadle ah oo softiweer ah oo ay softiweerku kaa caawiyeen inaad waxyaabo si hufan u qabato (aka: Return on Investment), waxay kaa caawisay inaad sii haysato ganacsi badan (aka: Return on Investment), waxay kaa caawisay inaad hesho ganacsi badan (aka: Return on Investment) ama kaa caawiyay inaad kordhiso faa'iidada (aka: Return on Investment) ka dibna ah qiimaha waxa aad heshay ka badan qiimaha aad bixisay. Tani waa wax fiican. Tani waa waxa aad rabto inaad sameyso.
Taa bedelkeeda, bixinta yar lacagta oo aan dib u helin maalgashiga waa wax xun. Tan macnaheedu waa inaad lacag lumisay… maahan badbaadiyey lacag. Marka… tag ku soo iibso astaanta goobta dad badan halkii aad ka kireysan lahayd hay'ad magac leh oo aad ku bixiso lix lambar si aad ugu ekaato bilyan doolar shirkad halkii aad ka iibsan lahayd dukaanka khamriga ee magaalada hoose. Waa inaad ka rajeyneysaa natiijooyin kala duwan iyo qiime ka duwan lacagta aad gelisay.
Inbadan oo lacag la bixiyo macnaheedu maahan inaad jeex jeexday
Telefishanka Hooyaday ayaa toddobaadkan uun jabsaday. Dib ayey u eegtay waana 7 sano jir waxayna ku bixisay $ 2,200 $ markii ay iibsaneysay. Maanta, hooyaday waxay amartay telefishan aad uga wanaagsan shaashad ballaadhan oo dhan $ 500. Waxay la yaabtay sida ay tikniyoolajiyaddu sida ugu dhakhsaha badan ugu soo hagaagtay iyo sida ay u awoodi karto ee ay u iibsan karto telefishan cusub oo ka wanaagsan. Kama xanaaqin in la jeexjeexay 7 sano ka hor. Way ku faraxsanayd inay heshay wax cajiib ah hadda. Tani waa wax fiican.
Waxaan dhawaanahay warbixinta falanqaynta goobta otomaatiga ah taasi waxay qaadan jirtay wiig laba qof inay gacanta ku dhamaystiraan. Maxaa nagu qaatay illaa 60 saacadood-nin oo wata taxane ah barnaamijyo barnaamijyo ah oo aan rukhsad siinay hadda waxay naga qaadanayaan wax ka yar saacad. Waxaan u ogolaaday qaar ka mid ah macaamiisheenna oo ku faraxsan warbixinnadeenii hore inay ogaadaan haddii dadaalka cusub oo aan u ogeysiiyo taas - tan iyo kharashkeena hadda waa qayb yar oo ka mid ah wixii ay ahaayeen, waxaan u gudbin jirnay keydkaas macaamiisheenna. Waa muhiim - wixii ay ku bixiyeen 1 jeer ayaa hadda naga heli kara sannad dhan warbixinno.
Intooda badan waa la saxiixay, laakiin mid baa dib ii soo qoray oo igu yidhi way ka cadhoodeen inay ahaayeen dooxay in ay wax badan ku bixiyeen warbixintii hore. Dabcan, markii aan warbixinta geeynay, way ku farxeen… ma xanaaqsaneyn. Waxay u isticmaaleen warbixinta sidii naqshad loogu talagalay horumarinta istiraatiijiyadooda suuq geynta internetka sanadka soo socda. Dhowr kun oo doolar oo maalgashi ah oo ku jira warbixinta ayaa keeni doonta boqolaal kun oo doolar soo celin. Taasi waa sida saxda ah ee ay ku fikireen, ilaa aan ka dhignay qiimaheena. Markii aan hoos u dhignay qiimaha waxaan si uun uga wareegnay qiime weyn oo aan ugu wareejinnay ripoff.
Hadda hadaladii wey dhamaadeen, tan waxaan dhihi doonaa. Waxaan u shaqeyn doonaa sida ugu macquulsan uguna macquulsan si aan u hubino in qiimaha shaqada aan qabano ay ka badato qiimaha aad bixinayso. Markaan sidaa yeelno, waxaad heli doontaa natiijooyin ganacsi oo sarreeya. Markaad gaarto natiijooyinka ganacsi ee sarreeya, waad qadarin doontaa shaqada aan kuu qabanaynno. Haddii aynaan guuleysan natiijooyinkaas, markaa waan ka wada hadli karnaa sidoo kale.
Tags: hay'addaiibsadaanqiimahaKartiniyadjabhel waxaad bixisayqiimahaxigashadaliiska wax iibsigaqiimaha
Taageerada Fiidiyowga ee Emailka ayaa sii kordheysa - oo shaqeynaya
Oktoobar 29, 2013 at 1:54 PM
Oktoobar 29, 2013 at 2:03 PM
13, 2013 at 8: 28 AM